Rakoto Frah Junior – 15 taona : hovaliana soa ireo mpianatra sodina | NewsMada
Rakoto Frah Junior – 15 taona : hovaliana soa ireo mpianatra sodina
Hiavaka ny fanamarihan’ny tarika Rakoto Frah Junior ny faha-15 taona niorenany, amin’ity taona ity. Hisongadina kokoa ny fizarana ilay zavakanto, vakoka anisan’ny mampiavaka antsika malagasy : ny fitsofana sodina. Hanatanteraka atrikasa na fampianarana sodina ny tarika, ny 2 hatramin’ny 14 aogositra izao etsy amin’ny Ivotoeran’ny kolontsaina malagasy (IKM) etsy Antsahavola.
Maimaimpoana ny fianarana ary tsy izay ihany satria, homena tsy misy takalo ireo mpianatra koa ny sodina hampiasain’izy ireo amin’izany, rehefa mahay izy, raha ny fanazavan’i Patrick na Rapà, mitarika ireto mpandimby an-dRakoto Frah ireto. Eo am-panomanana ireto zavamaneno ireto izy ireo, amin’izao fotoana izao. « Tsy misy ny mpanohana ara-bola fa ny tetibolan’ny tarika ihany no enti-miatrika izany”, hoy hatrany Rapà.
Fa ankoatra ny sodina, hizara ny fahaizany sy ny traikefany amin’ny fivelesana amponga sy ny dihy vakodrazana ihany koa ireo mpikambana ao amin’ny Rakoto Frah Junior. Marihina fa tontolo andro ny fianarana, mandritra io tapa-bolana io.
Hanomboka amin’io herinandro ho avy io ny fisoratana anarana amin’ity atrikasa ity ka miisa 500 ny olona kendrena hahazo tombony amin’izany ary tsy mifidy taona ny fianarana. Aorian’izao fizarana traikefa izao, hiaka-tsehatra indroa miantaona, etsy amin’ny Cercle germano-malagasy (CGM) ry Rakoto Frah Junior, ny 2 sy 3 septambra. Hotohizana amin’ny fitetezam-paritra izany, avy eo.